Sysbench: ita bvunzo dzekuita pakombuta yako | Linux Vakapindwa muropa
ari mashandiro ebvunzo kana mabhenji ivo vakanyanya kukosha mune dzakawanda zviitiko uko iwe unofanirwa kuziva mashandiro emuchina. Kuisa yedu system uye Hardware kumuyedzo kunodiwa kuti uzive kuti ingasvika kupi kana kungoziva asina kusimba mapoinzi ekugona kuikurisa mune ramangwana kana kugadzirisa mashandiro ayo. Kunyanya kukosha ndeye kune avo vari kunyanya kuda nekuita senge vatambi, vagadziri, masayendisiti, nezvimwe.
MuLinux, semamwe mapuratifomu, kune akawanda mapurogiramu ekuita iyi mhando yekuedzwa kwekuita. An app ine graphical interface yatatotaura nezvayo yakawanda ndeye yakaoma info. Unogona kuiisa nyore uye nekuona ruzivo nezve Hardware nesystem yauinayo kuwedzera kune imwe data rekuita, ndiko kuti, yakafanana neEverest kana AIDA64 iripo yeMicrosoft Windows. Asi haisi iyo yega chirongwa chayo ...
Ini ndakaedzawo suite yezvishandiso kubva kune inozivikanwa Phoronix portal. ndoreva Phoronix Bvunzo Suite, rongedza rakazara rezvishandiso kuyera mashandiro muudzame nekutenda kune mabhenji maturusi ayo anoedza CPU yako, RAM, hard disk, nezvimwe, zvese izvi zvichibva pane zvinyorwa zvePHP zvauchange uchiita kubva kune iyo terminal. Uye zvakare, kune dzimwewo nzira dzakadai seGeekBench, kunyange ini ndichisarudza iyo kubva Phoronix iyo inobvumawo kuisa zvimwe zvinonakidza zvinowedzera, izvo zvatakataura nezvazvo muLxA.
Chekupedzisira, ndinoda kutaura nezveimwe imwe nzira yandisati ndapa mune ino blog izvozvi, uye ndizvo Syssbench. Nayo unogona kuita mabhenji ekuyedza uye kuziva mashandiro uye hunhu hwezvimwe zvinhu uye masisitimu akadai seCPU, RAM, I / O, nezvimwewo, zvese zvinovakirwa pamaturusi akareruka etambo yekuraira. Kana iwe uchida kuyedza, iwe unogona kuiisa pamwe nemaneja wepakeji uyo ako distro anoshandisa, nekuti iri pakati pemapakeji ezve akakosha repos, uye kuishandisa ichave yakakwana kushandisa zita rayo rinoteverwa neinoenderana sarudzo. Ndokunge, sysbench-kuyedza = x kumhanya kana kubatsira rubatsiro. Semuenzaniso, kana isu tichida kumhanyisa bvunzo yeCPU:
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Sysbench: ita bvunzo dzekuita pakombuta yako
Kutenda iyo info, zvakandibatsira!